[WAR DEG-DEG AH]:-Xulka Qaranka Dalka Spain Oo Eryey Tababarihii Xulka Qarankaasi Iyo Sababta Ka Dambeysa Oo La Helay
Wednesday June 13, 2018 - 15:00:45 in Wararka by Abdi A.
Spain-(Caalami-News)-Xulka qaranka Spain ayaa xaqiijiyay in uu tababarenimadii ka eryay Julen Lopetegui, iyadoo bilaabashada Koobka Adduunka ay ka dhiman tahay wax ka yar 24 saac oo kali ah.
Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta SpainLuis Rubiales ayaa la filayay inuu qeyb ka noqon doono shirweynaha FIFA ee maanta lagu qabanayay magaalada Moscow ee dalka Russia halkaas oo ay ku kulmayaan madaxda xidhiidhada kubadda cagta ee hoos yimaada ururka ugu weyn kubadda cagta.
"Waxaa nalagu qasbay inaan ka takhalusno tababaraha qaranka. Waxaan u rajeyneynaa nasiibka ugu weyn” ayuu yidhi Rubiales oo ka hadlayay shirka jaraa’id ee lagu ceydhiyay tababarahii hore Porto.
"Wadahadalada waxey dhaceen iyadoo aan wax xog ah lasoo siinin xiriirka kubada cagta Spain, waxaana nalagu wargaliyay shan daqiiqo ka hor inta aan saxaafadda lasiinin warka oo rasmi ah, waxaa jirta hab loo daboolo waxyaabaha baahida loo qabo in la fuliyo” ayuu mar kale yiri Rubiales.
Sidoo kale wuxuu ka gaabsaday madaxweynaha inuu xaqiijiyo shaqsiga badali doona, wuxuuna hoosta ka xariiqay iney la hadli doonaan ciyaartoyda isla markaana wixii war ah ay dib kasoo sheegi doonaan.
"Waxaan qaatay diyaarad anigoo kasoo laabtay Moscow, waxaan seegay codeynta loo qabanayay halka lagu martigalin doono koobka Aduunka, waa inaan ka falcelinaa, waan ogahay wax walba oo aan sameeyo in la igu dhaleeceyn doono, balse waa inaan aqbalo”